N'ihe omume ntụrụndụ maka ụmụ nwanyị na aka ha
Psychology na mmekọrịta Mara onwe gi
Ihe ntụrụndụ maka ụmụ nwanyị bụ ihe a ma ama, ebe ị ga-eji aka aka gị mee ihe. Ọrụ ndị kachasị mma nke mmekọahụ kachasị mma na-adọrọ mmasị ma na-agwụ ike, ha na-esikarị metụtara nhicha, ịsa na nri. N'ụzọ dị iche iche na-agbanwe ndụ ha, ndị inyom na-achọ ihe ntụrụndụ ha ga-achọ.
Ihe omume ntụrụndụ - Ihe dị mkpa
Na-ejikọta. Ihe ntụrụndụ kachasị ewu ewu nke na-anaghị ahapụ ọnọdụ ya ruo ogologo oge. Ndị inyom na-agbakwasị ụda uwe, akwa, akwa, akwa akwa na ọtụtụ uwe na ngwa ndị ọzọ. Ị nwere ike ijikọta ọ bụghị naanị site na eriri ụkwụ, ma jiri eriri.
Ịkwa akwa. Nhọrọ ọzọ bụ ihe omume ntụrụndụ nke ga-enyere gị aka ịzụta ọ bụghị nanị uwe ejiji gị, kama ịghakwa ihe maka ndị ikwu gị.
Ịmepụta ọla na ngwa. Ihe ntụrụndụ a maka ụmụ agbọghọ bụ ihe a ma ama, ebe ọ bụ na mmadụ nwere ike ịmepụta ihe ịchọ mma pụrụ iche dị oké ọnụ ahịa na ụlọ ahịa, ị ga-efu 2 ma ọ bụ ọbụna ugboro 3 dị ọnụ ala karịa.
N'ihe omume ntụrụndụ - aka aka
Wepụ ya. Usoro a na - enye gị ohere ịchọ mma ọ bụla kwesịrị ekwesị, dịka ọmụmaatụ, akpụkpọ anụ, karama, teepu ederede na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'etiti ndị inyom nwere ụmụ, ihe omume ntụrụndụ nke iji aka ha na-eme ihe eji egwuri egwu bụ ihe a ma ama. Ya mere, ị nwere ike imere nwa gị ihe egwuregwu na-enweghị atụ ma dị egwu nke ga-adị mma ma na-enwe mmekọrịta na gburugburu ebe obibi. Enwere otutu uzo iji meputa ihe eji egwuri egwu.
Ihe omume ntụrụndụ ọzọ na-adọrọ mmasị, nke na-aghọwanye ewu ewu - ịcha akwa na akwa. A malitere ya na ọla aka nkịtị, ugbu a, nwanyị na-ahụ maka nwanyị na-emepụta ihe kachasị mma: osisi na okooko osisi site na mkpịsị ụkwụ, yana ịcha mma.
Scrapbooking. Ihe nkuzi nke na-enye gị ohere ịmepụta otu album maka foto. Maka album, akwụkwọ pụrụ iche ahọpụtara, ngwa , ọla na akwụkwọ.
Ntugharị ọnụ ọgụgụ nke auditory
Olee otu esi achọta obi iru ala?
Enwere ike nke ahụ mmadụ
Hụ onwe gị n'anya - usoro nkà mmụta uche
Mmetụta mmanya na-aba n'ahụ mmadụ
Ambidextr - ọganihu na nkwonkwo nke ambatextory
Kedu ka esi tufuo egwu ọnwụ?
Àgwà nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Ụlọ nzukọ nke uche - otu esi agafe ihu?
Njirimara nke Onwe
Ọrịa nke hyperactivity na ntụpọ uche
Enyem aka maka ịda mbà n'obi
Cutlets na gravy - Ezi ntụziaka nke na-atọ ụtọ na obi ọkụ
Karịa ịhụnanya: nkịta 30 ndị a na-echere ọdịdị nwa ahụ anya!
Ewube ákwà ọcha - ihe ngwọta mbụ maka ime ụlọ
Marinade maka toki
Uwe akpụkpọ ụkwụ oyi nke ụmụ nwanyị n'elu ikpo okwu
Efu maka Ntutu
Zute Luhu - nwa na-agba ọsọ na mbara ala!
Nwatakịrị adịghị ewe obi
Ihe ndekọ nke Daniel Radcliffe
Ntughari na isi n'okpuru uwe
Mgbaghara ndị mmadụ
Kedu otu ị ga esi ekewa nwoke na ị hụrụ n'anya?
Kedu ihe akpụkpọ ụkwụ dị?
A na-agbaji agba nwa
35 nkịtị phenomena maka Dubai
Autarky - gini bu ya na gini ka o bu?
Ụlọ Elu Tower (Nairobi)
Gịnị bara uru maka blueberries?
Nzọụkwụ nke nne kpakpando: nwa North West na-ebu akpụkpọ ụkwụ ya n'ikiri ụkwụ
Orlando Bloom na-ezobe na mmekọrịta ọhụrụ niile na Kendall Jenner
Ụdị ndị a ma ama